Loaders kodiarana, Loaders farany farany, Loaders kodiarana mifatotra - Jufenglong
mon - fri: 10 maraina - 7 harivasat - masoandro: 10 maraina - 3 hariva
Forklift amin'ny terrain terrain
Fampidiran-tena amin'ny mixer Concrete
dia orinasa iray misahana manokana amin'ny famokarana loaders sy kamiao mixer mihinana tena.
LEHMAN entana mavesatra andiana entana, na ny anatiny na ny any ivelany, ny kojakoja mifanandrify indrindra, ny kalitao azo itokisana, mahafeno ny fepetra takiana amin'ny mahaolona, ​​namolavola biraon'ny firenena mihoatra ny 10 eran'izao tontolo izao, ary ny vokatra vokariny dia aondrana any amin'ny firenena sy faritra 20 toa an'i India , lran, Russia, Libya, Vietnam, Tanzania, Africa South, Etiopia ary Brezila.
Ny orinasa dia manana tanjaka matanjaka matanjaka, mampifandray ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny vokatra, ny famokarana, ny varotra ary ny serivisy, ary mitarika amin'ny fahazoana ny famokarana fitaovana manokana sy ny fahazoan-dàlana hamokatra amin'ny alàlan'ny CE CE Certificatin, ISO9001 fanamarinana rafitra kalitao internatinal
Mandefa kamio mixer ho an'ny tenany
Ity vokatra ity dia afaka manolo ny andiana mpamorona, mpametaka, mpametaka ary tanker. Ary koa mpiasa maherin'ny enina, dia taranaka vaovao mitarika vokatra indostrialy fananganana. Ny tanky dia azo soloina amin'ny degre 270 fa tsy misy faran'ny maty amin'ny lafiny telo.
Loaders farany farany
Fanamafisana nohamafisina, ny afovoan'ny fizarana hery misintona dia mitombina, mahazaka hery matanjaka.
ny vokatra dia aondrana any amin'ny firenena maherin'ny 20 toa an'i India, lran, Russia, Libya, Vietnam, Tanzania, Africa South, Ethiopia ary Brazil.
Fitaovana fantsom-bozaka mandeha ho azy robot mba hiantohana ny kalitaon'ny welding, fanamiana fanamiana milamina, fehikibo matevina.
nampiditra ny orinasa German Fully Automatic Laser Cutting sy fitaovana tsy feno lamba ary fitaovana robot welding CNC Alemanina.
entana mahafeno fepetra
Mpanamboatra beton-drakitra mandefa tena ...
Fampifangaroana beton-tena izay tsy azo lavina Tao anatin'izay taona lasa izay ny tetikasa injeniera dia mihabe hatrany hatrany ny Self Loading Concrete Mixersr. Na amin'ny tanàna, tanàna, na amin'ny ...
Fantatrao ve ireo torohevitra enina hahatongavana ho tsara ...
Ny mpandraharaha Front End Loaders tsara dia afaka mahafantatra tsara ny fampiasana ny masinina rehefa mitondra ny loader, mampihena ny masinina milina, mampihena ny fanjifana solika ary mamita ny asa haingana sy tsara. Ny mpanaraka ...
Mahaliana amin'ny LENMAN?
Misy mihoatra ny 80 mpiasa teknika antonony sy zokiolona ao amin'ny indostria, mpiasa maherin'ny 700, ary ny ekipa mpikaroka siantifika matanjaka dia nanome antoka ny fikarohana sy ny fampandrosoana tsy miankina an'ny orinasa, indrindra ny fiaraha-miasa maharitra amin'ny oniversite sy universitieThus, kalitao avo lenta ekipa orinasa natsangana.
MIASA MIASA AMINAY
Manova ny teny ny fanavaozana, mamorona ny ho avy ny kalitao! Shan Yi milina LTD, miorina ao Laizhou, faritanin'i Shandong, dia naorina tamin'ny taona 1990 S. Ny orinasa dia manarona faritra 4000 sqm ary manana atrikasa famokarana modem 20000 sqm miaraka amin'ny fampiasam-bola totalin'ny 200000000 yuan, orinasa iray manokana amin'ny ny famokarana ny kamio sy ny kamio mixer. Izy io dia mamokatra mpamandrika 50000 sy kamio mixer mihinana tena 8000
Endri-pamokarana Shanyi Lehman
14 Aog, 20
Kamiao mpanafatra mandefa tena, Simenitra mixer mandraraka beton, Loader kodiarana 2021d, Loaders kodiarana mifatotra, Lojian'ny farany farany lehibe manerantany, Loaders Wheel Wheel,
Adiresy: Shahe Industrial Park, Laizhou City, faritanin'i Shandong